Izindaba - unyaka omusha waseChina uyeza
Unyaka omusha waseShayina uyeza
Unyaka Omusha WamaLunar ngo-2021 ungoFebhuwari 12.
Ngesikhathi soMkhosi Wentwasahlobo, uHan waseChina kanye nabanye bezinhlanga ezimbalwa babamba imikhosi eyahlukahlukene. Le misebenzi ikakhulukazi ikhulekela amadlozi, anezinhlobo ezicebile nezinemibalabala nezici ezicebile zobuhlanga.
Ngaphansi kwethonya lesiko lamaShayina, amanye amazwe nezizwe ezingaphansi kwesiyingi sabalingiswa baseChina banomkhuba wokugubha uMkhosi Wentwasahlobo. Ngosuku loMkhosi Wentwasahlobo, abantu babuyela emakhaya abo ngangokunokwenzeka ukuze bahlangane nezihlobo zabo, bezwakalisa ukulindela kwabo okukhulu ngonyaka ozayo kanye nezifiso zabo ezinhle kulo nyaka omusha.
Umkhosi wasentwasahlobo awusiwo nje umkhosi kuphela kodwa futhi uyisithwali esibalulekile sabantu baseChina ukuthi badedele imizwa yabo futhi banelise izidingo zabo ezingokwengqondo. Kungumkhosi waminyaka yonke wesizwe samaShayina.
Isikhathi Iposi: Feb-08-2021
Sishiyele i-imeyili addressto yakho ukuze ubhalise